#Keating oo ka hadlay dhacdadii ugu weyneyd ee uu la kulmay mudadii uu Somalia joogay (Wareysi) - Get Latest News From Horn of Africa
#Keating oo ka hadlay dhacdadii ugu weyneyd ee uu la kulmay mudadii uu Somalia joogay (Wareysi)
By On Sep 14, 2018 Last updated Mar 31, 2019
In la noqdo Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud (SRSG) ma aha arrin fudud iska tamashle ah, gaar ahaan jawiga adag sida Soomaaliya. Maxaa kugu soo jiitay shaqadan?
Markaa ka dib, badanaa waxaa la yiraahdaa in aragtida guud ee Soomaaliya ay si aad ah uga duwan tahay xaqiiqada Soomaaliya?
Nabad xil ku wareejintii awoodda madaxweynaha ee bishii Febraayo 2017. Taasi waxay ka dambeysay hanaan doorashooyin baarlamaan, waxay ahayd arrin buuq badnayd – oo adkayd, aan ceeb la’aan ahayn, oo lahayd dhibaatooyin badan oo badan oo la xidhiidha, laakiin waxay keentay natiijo ay xalaal ahaan u arkeen una guddoomeen beesha caalamka iyo ku dhawaad dhammaan Soomaalida. Dabcan, Al-Shabaab ma aysan soo dhoweyn, laakiin qof kastoo kale wuu soo dhoweeyay.
Ka waran dhacdada/horumarka ugu weyn ee dhinka gargaarka bani’aadamnimada?
Ka hortagidda macluusha sannadkii 2017. Waxay ila tahay in isbedelka wareejinta awoodda madaxweynanimada oo si nabad ah lagu wareejiyay uu gacan ka gaystay guushaas. Waxa ugu horreeyay ee uu madaxweynuhu sameeyay markii la doortey waxay ahayd inuu yiri ‘Waxaan doonayaa olole qaran oo arrintan lagula tacaalo,’ kaasoo laga qaybgeliyay qurba-joogta iyo ganacsatada, iyo sidoo kale beesha caalamka.
Horumarka ugu weyn ee Soomaaliya ee xagga horumarinta?
Waxaa jira waxyaabo dhacay labadii sanno ee ugu dambeeyay oo aan u malaynayo in xukuumaddan amaan badan ku muteysatay, taas oo asal ahaan ah aragtida ah in haddii Soomaaliya ay billaabin inay ururiso dhaqaalaheeda, waxay ahaanaysaa mid ku tiirsan gargaarka beesha caalamka.
Sideed u aragtaa muuqaalka mustaqbalka Soomaaliya?
Waxaan u maleynayaa in taasi ay ku xiran tahay hadba inta ay madaxda Soomaaliyeed – ha ahaadaan kuwo kuwo ku jira ganacsi, siyaasad ama bulshada rayidka – u leeyihiin rabitaan ay ku wada shaqeeyaan si loo gaaro faa’iido loo dhanyahay. Mararka qaar, tusaalaha aan jecelahay inaan arrintan u adeegsado waa in 20-30 sanno ay jiri jirtay in si adag loogu tartamo awoodda, saameynta iyo gacan ku haynta, oo ay ka mid tahay in la isku qabsado dhaqaalaha iyo dakhliga, si loo qaybsado awoodda ama dhaqaalaha sidaa u weyn. Haddii ay isla shaqeeyaan – in la helo boqolkiiba 25 oo ka mid ah dhaqaalaha ama awoodda sidaa u weyn ayaa ah mid dhab ahaantii aad uga xiiso yar in la helo boqolkiiba shan oo ka mid ah dhaqaale ama awood 100 jeer intaa ka weyn!
Waxaa la yaab leb in, iyadoo ay arrimuhu si tartiib tartiib ah u soo hagaagayaan Soomaaliya, caqabaddu waa sidii Soomaaliya loogu hayn lahaa shaashada raadaarka iyadoo sida caadada ah dareenka beesha caalamku uu aado meelaha aadka u caansan – oo inta badan ah meelaha arrimo waaweyn ay ka dhacaan.